Amakati ase-Balinese anezinwele ezinemibala eminingi
Amakati ase-Balinese anezinwele eside abeletha ingenye yezinhlobo ezinhle kakhulu zanamuhla. Ikati ye-Balinese imelela umusa omuhle wezingcingo ezingavamile kusukela emasendeni aseBali. Kodwa, njengoba kwenzeka njalo, wayengaziwa ngokushesha.
Iziqhingi zase-Indonesia akuzona izindawo zokuzalwa zalesi sizwe. Kodwa esinye sezimangaliso ze-tropical paradise island e-Bali yizidlali ezidumile zamathempeli eBuddhist. Yilezi amantombazane angenakuqhathaniswa nokuhleleka okumangalisayo nokunyakaza kwepulasitiki okugqugquzela abalimi baseMelika ukuba baqambe amantombazane amasha anomunyu omude obomvu obunamakhaza - amaBalinese. Abathandi bezintandokazi abathandana nabo abathandekayo bangabona ebusweni obukhanyayo bamehlo ama-balines emkhathini ode kakhulu weziqhingi ezingaphandle. Futhi ekuhambeni kwepulasitiki kwalolu buhle, umusa wabantu abadansa uyaqagela.
Uhlobo olunezinwele ezinezinwele ezinemibala ephakathi kweBalinese lwavela ngenxa yokuguqulwa kohlobo lwe-Siamese olunomsindo omfushane. Iqiniso liwukuthi noma yiliphi ikati elifushane elinomfutho lingabonisa i-gene longheired. Leli gciwane ngezinye izikhathi linikeza ubuchopho obude kwelinye lamakhitt emndenini wabazali abanezinwele ezimfushane. Abalimi abavame ukulahla inzalo enjalo futhi abavumelani nokuzalana. Futhi lokhu kwenzeka isikhathi eside nje uma omunye wabahlakaniphi bekhanda lobuhle engaboni i-swan kudoti elibi. Ngakho kwenzeka namakati aseBalinese ukuzala. Ema-40s ekhulwini lokugcina e-United States of America, abakhiqizi ababili bawela iSiamese ezinesici esinezinwele ezinzima ukuze balungise lezi zici. Ngenxa yalokho, ubuciko obuhle bamazinyane baseSiamese baqala ukuveza "u-silk shakgy". Iphunga lethenda elihlotshiswe ngomsila omude.
Ekuqaleni, amakati aseBalinese ayenamafomu anezici ezinomzimba futhi azungezile. Imizamo yabalimi ngaphansi kwethonya lemfashini yaseMelika yenziwe izinguquko kulokhu kuvela. Ngosizo lokukhethwa, inzalo yaseBalinese ithole umbhobho ohlangene, izindlebe ezihlangene nomsila omncane. Ngaphambi kobuhle obunjalo akekho owayengamelana nayo. Futhi eminyakeni engamashumi ayisikhombisa ekhulwini leminyaka lama-20 kwafika ukuqashelwa kwamakati aseBalese asezinwele ezinemizuzu emine.
Isici esikhethekile sohlobo lwaseBalinese ukuthi abanalo i-undercoat. Ingubo enhle ifana noboya bezimvu. Ihamba kahle ngokomzimba, igcizelela imigqa emnandi. Ngokwemvelo, ama-balinese ayenokuxhumana futhi azwela. Esinye sezici eziyinhloko zamakati ase-Balinese - aqinile kakhulu, ungasho ukuthi "inja" okunamathiselwe kumnikazi. Ikati ye-Balinese ingahle ibhaliswe ngokuphepha ngendlela efana nenja. Kodwa kufanele uqaphele ukuthi i-leash ayinakunqothula uboya obumnyama obuyinkimbinkimbi.
Amakati ama-Balinese zibeletha kakhulu. Bathanda "ukukhuluma" namalungu omndeni wabo. Ngokuvamile ikakhulukazi nomuntu abacabanga ukuthi uyinkosi yabo. Ngokungafani ne-Siamese cat i-Balinese inezwi elimnandi nakakhulu kakhulu. Uyakuthanda kakhulu. Unobungane obuhle nawo wonke amalungu omndeni. Khumbula ukuthi uhlobo lweBalinese lwaluvela emzalweni weSiamese (owaziwayo ngenxa yokushisa kwawo). Ngakho-ke, i-balinese idinga ukukhulisa kahle, kumnene. Abanikazi abaningi bayavuma ukuthi ubumnene bamakati aseBalinese bukhulu kakhulu kunokhokho babo - iSiamese. Kodwa ngesivinini nangokwemvelo abanakho okulingana phakathi kweningi lamahlumela. Bakulungele ukugijimela, gxuma, endaweni ethile ukukhuphuka usuku oluzungezile. Ikakhulu kunesidingo sokuhamba kwezinsana - ukuthuthukiswa okujwayelekile kwemisipha namasipha.
Uma uzizinakekela ikati, u-Breinese obunomunyu obomvu obunemizuzu engamasonto angaba yisibalo esifudumele esilindele. Uma udinga i-getter engesabi, u-balinese naye uyakhetha. I-Balinese yi-mousetraps enhle ngokwemvelo. Ikati elinenjabulo lizokuletha, njengendodakazikazi ethandekayo, isisulu. Futhi ulinde udumo olufanelwe kahle.
Indlela yokwelapha izidakamizwa emakati?
Ukuziphatha kwamakati asekhaya
Okuqukethwe komlinganiso wokuhlobisa
Ukulungiselela ukuzalwa kwekati
Indlela yokunakekela ikati lasePheresiya
Ukwenza kuqala ngezandla zakho
Ukulahlekelwa izinwele ezinja
Yini owesifazane okudingeka abe nomuzwa wesifazane?
I-toese tofu: izakhiwo eziwusizo
I-Tilda - ukubunjwa okujwayelekile kwesilwane sezilwane
Ungabuyisa kanjani iphunga lezinkwa ezibhaka?
Isaladi kusuka kubhontshisi okusanhlamvu
Izinwele ezivumelekile ezivikelekile
UVladimir Presnyakov noNataliya Podolskaya baba abazali
Lesi sibusiso sikamama sivikela ingane yonke impilo yakhe: Umthandazo kanye nesakramente
Izindlela zanamuhla zokwelashwa kwe-herpes
Amakhowe alayishiwe aqoshiwe
Ukuhlanzeka kwezicathulo zabafana namantombazane
Ukulungiswa kwesibalo ngaphandle kokuhlinzwa
Isilinganiso se-movie ezesabeka kakhulu
Ukuhlukaniswa ngothando nomshado: Izindlela ezingu-8 ezivela kumlumbi ozuzayo